Uhlu Standard imikhiqizo ngeviki. Imenyu sonto: uhlu imikhiqizo
Ukuthenga ukudla ingenye izinto eqolo ibhajethi umndeni. Ukuhlelela lezi zindleko Ungagcina kuze kufike 30% izimali. Ngakho namuhla sizokwazi nawe ukufunda yokwakha uhlu imikhiqizo ngeviki.
Kungani sidinga uhlu olunjalo?
Ukudla ngeke ivalwe isigubhukane, ephoqa isikhathi esengeziwe ukuze ukuyothenga. Uma nizolilalela ulandele uhlu, ngakho-ke angeke wenze ukuthenga ngokuphamazela kanye wonge imali.
Uhlu kusekelwe imenyu kusengaphambili ihlanganiswe. Yonke imikhiqizo ayovulelwa ngesikhathi, futhi wena akudingeki adala ubuchopho babo phezu ukuthi wenzeni izinsalela umphako, ukuze bangakubangeli aye sawohloka.
Kungani ukwenza imenyu?
Kunzima ukunquma ukuthi yikuphi ukudla kudingeka uma ungazi ukuthi uyangena ukupheka. Ngaphandle uhlu imenyu uyokwakhiwa othathwe nophahla ngaphakathi, phakathi nesonto babe njalo okuthile ukuze bathenge okwengeziwe.
Mhlawumbe hhayi esetshenziswa ukuthuthukisa imenyu masonto onke ngeke kube lula, futhi ngeke ucabange ukuthi kuwukuchitha isikhathi. Kodwa cabanga ngalokho uyazuza uzothola!
Okokuqala, lo msebenzi eyinhloko zizoxazululwa ngokuzenzakalela - ukuthenga ukudla ngesonto. Uhlu kuyoba uhlu elula izithako izitsha kufakwe imenyu.
Okwesibili, khumbula ukuthi izinkulungwane emizi nsuku ukunwaya amakhanda abo phezu yini ukupheka namuhla. Ungadliwa alungise, bese uya esitolo, ngoba esiqandisini sishoda ezinye izinto kancane. Ungakwazi balahle loko.
Ukudla kuba lomnotho, ngakho akunakwenzeka uyofuna ukuhlela kusengaphambili ukuba kuphele isidlo efanayo pasta kanye isaladi. Uzofunda indlela ukupheka izitsha ezintsha.
Ekugcineni, imenyu kuzokusiza sihlaziye ukuthi ukudla yakho ilungile futhi kunokulinganisela yini.
kufanele ngenza Kukangaki uhlu?
Cishe akunakwenzeka ukuthi ngeke uyenze eyakho kanye uhlu ejwayelekile imikhiqizo ngeviki bese uyakhohlwa. Okokuqala, kungani ungathi njalo ukupheka izitsha efanayo! Okwesibili, ngezinye izikhathi abantu begubha amaholide, ngihlezi ukudla, okudinga izinguquko uhlu evamile. Okwesithathu, imenyu ehlobo kuhlukile ebusika.
Okuningi kuxhomeke ekutheni uyakusebenzisa unomkhuba okwenza ezikhona kanye izikhala Ingabe izithelo nemifino nqabela ehlobo, Yenza ukhukhamba kanye jam, kungakhathaliseki lulwimi siphelile ekhaya ukupheka, kungakhathaliseki izikhwama esitolo ushukela, okusanhlamvu kanye amazambane ukuthenga, njll
Uma ngaso sonke isikhathi amasheya, ezimweni eziningi, nithenga uhlu imikhiqizo ngeviki ngeke acabangele ukuthi kuyadingeka ukuthenga. Uma engongi uziqhayisa abakwazi ke samasonto onke kubhasikidi ukudla izobandakanya cishe zonke izithako sizosetshenziswa langa kulamalanga lasikhombisa lalandzelako.
Kukhona futhi uhlu ngezikhathi ezikhethekile. Ngokwesibonelo, uma uhlela ukuthola izivakashi noma anqume ukuya on ukudla ngoMsombuluko.
ongakhetha ngomumo eyenziwe
Uma ucabanga ukuthi kwanele ukuze uthole uhlu ngomumo imikhiqizo on the Internet for ngesonto, futhi inkinga isixazululiwe, nenze iphutha. Yiqiniso, izinhlu ezinjalo zikhona, kodwa angeke alungele wena, ngoba yonke imindeni inezidingo imikhuba yabo kunobuciko futhi amabhajethi zihlukile. Isigamu imikhiqizo kungaba nje beqile kuwe kusukela uhlu yomunye.
Ukuze lula umsebenzi, ungasebenzisa uhlu yomunye kungase kushintshwe ukuze uvumelane nezidingo zakho. Kodwa okokuqala ngeke kusadingeka imenyu masonto onke ukuthi wayenokuthile okunenani ekudwebeni.
Imithetho okukhiwa imenyu
Nquma usuku ezokwenza ukuthenga. Khona-ke wena uyakwazi ukuhlela ekudleni kwakho ukuze imikhiqizo okonakalayo uzilungiselele lokuqala, futhi musa ukuthenga kakhulu.
Sicela unamathisele kule zokuqashwa zabo bonke amalungu omndeni.
Cabanga esitokisini etholakalayo. Ushukela, ufulawa, igilosa zivame ukuthengwa nesilinganiso esikhulu, futhi asikho isidingo ukuthenga nabo masonto onke.
Ungenzi uhlu imikhiqizo ngeviki esiswini esingenalutho, noma ohlwini kuyoba eziningi izinto ezingasadingeki. Nokho, ngemva kokudla ukukwenza, futhi, akufanele kube, ngaphandle kwalokho izinto ezidingekayo kubonakale ozikhethela.
Ungakhohlwa ukuthi isiyalo ibutho ekuphileni kwansuku zonke noma yini. Uma ngokungazelelwe ungafuni ukuba into ihlelelwe ku imenyu noma cha amandla ngivuke ekuseni ukuze alungiselele pancake kuhlelwe, musa bophezela. Nakekela ukutholakala isitokwe zasekhaya kanye nemikhiqizo lulwimi siphelile afakwe ohlwini imikhiqizo ukuthi ukusiza ezimweni ezinjalo. Ngokwesibonelo, kungase kube amadombolo, Muesli, ushizi namasoseji, yogurt, inhlanzi okusemathinini , njll
Wonke umuntu indlela yakhe siqu. Lapho ukudweba up uhlu amamenyu iyoba umkhuba, wenza kanjalo uyokuqonda indlela lula. Ngokokuqala ngqá ungenza kanjalo.
Ukuze ugweme ukudideka Hlukanisa uhlu imikhiqizo ezidingekayo ngeviki emaqenjini: zokudla, iziphuzo, inyama, inkukhu, amaswidi, njll Ngakho lecacile kubuye kube ngokushesha. Ungenza ngisho kabanzi, isibonelo, isigaba "Izithelo" ku "fresh", "eqandisiwe" futhi "ekheniwe". Le ndlela konga isikhathi esitolo - akudingeki ugijime ne Sibona emuva naphambili. Futhi kuyoba lula ngisho yokuqhuba izifundo zokubala, uma wenza lokhu.
Manje uqhubeke kusuka kwimenyu. Ngokwesibonelo, ngoMsombuluko une ibhulakufesi amaqanda ethosiwe ne ham kanye ikhofi kanye kwasemini - isobho kanye amazambane okhamiwe wahlanganiswa nge inkukhu. Thatha uhlu nalutho nemikhakha futhi basakaza izithako ngemacembu. Ngo "Imifino" - amazambane, iklabishi, izaqathe, u-anyanisi, u-beetroot nesweli. I "Phuza" - ikhofi. Ngo "imikhiqizo Inyama" - inkukhu, inyama yenkomo, njll
Awukwazi ukwenza uhlu imikhiqizo evela emaqenjini, kepha kusukela kwasekuqaleni ukwenza omunye uhlu enkulu ngokuvumelana imenyu. Khona-ke, ukubala ubuningi isithako ngamunye bese zisakazwa izigaba ohlwini lokugcina.
Yiqiniso, ngeke ukwazi ukuchitha isikhathi ku ukuwohloka yamaqembu ikholomu uhlu yonke imikhiqizo ezidingekayo. Nalapha futhi, kuyindaba lula.
Ngemva kohlu izinto saziso uqale ukungeza ozikhethela - amaswidi kanye izibiliboco. Okulandelayo, hlanganisa imikhiqizo nge eside izinqolobane eshalofini zokuphila kwabantu izokuphela (pasta, okusanhlamvu, usawoti, ikhofi, itiye).
Ngo okufanayo, ungakwazi ngokushesha ukulobaloba a uhlu ambalwa imikhiqizo latawudzingeka kudingeka phakathi nesonto. Ngokwesibonelo, imikhiqizo yobisi isinkwa Kungcono ukuthenga fresh.
Njengoba kushiwo ngaphambili, umndeni ngamunye has imenyu yayo anolaka sonto. Uhlu imikhiqizo, ngokulandelana, futhi. Kodwa okokuqala, ungasebenzisa isifanekiso. Ngokwesibonelo, ezifana.
Imikhiqizo yobisi. Lapha benza ushizi, ubisi, iyogathi, ukhilimu omuncu, amaqanda, ibhotela, ushizi, njll
Inyama, inkukhu, inhlanzi kanye kwasolwandle. Faka esigabeni amaqanda esifanayo, yenkomo, inyama okusemathinini, inhlanzi okusemathinini.
Namakha, namafutha. Kuyinto iyiphi izinongo, amafutha yemifino, uviniga, lwesinaphi, zonke izinhlobo nososo.
Imifino, izithelo. Ungakwazi uhlu omisiwe izithelo, amantongomane, Muesli.
Sokudla. Pasta, okusanhlamvu, irayisi, soda, usawoti, ushukela, ufulawa, imvubelo, uphizi, ubhontshisi, isinkwa, njll
Iziphuzo. Itiye, ikhofi, uphawuda. Ungakhohlwa ukufaka ukunambitheka okuthandayo. Ngokwesibonelo, ugcwalise isigaba ukhilimu yobisi, uma uzengeze ikhofi.
Izibiliboco kanye amaswidi.
Ngivumeleni ngichazele ukuthi, ukuze kube lula, ungenza ngcono ohlwini lwakho zokudla sonto ezinqumela ngokuningiliziwe.
ukuhlela Okumbi imenyu
Nge zonke izinzuzo inqubo, angase abafani nabantu matasa. ibhulakufesi lwakho - ikhofi, nawe zizokudla endaweni cafe eliseduze kwehhovisi kanye kusihlwa uthanda ukupheka iphakethe ravioli, noma adle yogurt? Khona-ke ukulungiswa imenyu enemininingwane Akusikho okwenu.
Uma usebenzela eningi, bese ngempelasonto cishe ziyoba uncamela uphumule futhi bahlanganyele wokuzilibazisa, ukungacabangi wezaseKhaya. Futhi-ke, ngemva kosuku olunzima nawe okungenani ufuna ukupheka dinner kuyinkimbinkimbi.
Ngaphandle ekufuneni izindlela, sokwaba ukudla emini nokwakha uhlu imikhiqizo ezidingekayo kuzothatha isikhathi esithile. Kuthatha isikhathi esengeziwe ekulungiseleleni ukudla ngokuvumelana imenyu. It kuvela ukuthi indlela kufanelekile kuphela abantu isheduli hhayi Friend kakhulu.
Futhi, nalabo abafuna ukwenza imenyu masonto onke, udinga ukwazi ukupheka okungenani isidlo eziyisisekelo, ngaphandle kwalokho kuzoba nzima ekuqaleni. Yiqiniso, izindlela ahlelwe izithako kanye nobungako babo, kodwa kholwa yimi, practice kungase kungabi indlela ocabanga ngayo.
Kukho konke ukuphila kwami Kuhleliwe nasengqondweni nzima. Kuzoba izimo lapho, isibonelo, kumenyu kwakusihlwa yakho izolo nokunye okufana nokolweni wokudla nge cutlet, futhi (noma othile emndenini) ngempela ufuna chips. Wena ukupheka amazambane, asehlisele lonke uhlelo, njengoba iphalishi is lingadliwa, nezinye izinhlobo zokudla kakade ehlelelwe ngosuku olulandelayo.
Kuthiwani uma kungekho isikhathi noma isifiso sokuthuthuka imenyu?
Ukuze wenze imenyu kusengaphambili futhi ulandele uhlu izinto ezinhlelweni zokuthenga ngokucacile, udinga ukuba umuntu ehlelekile ngempela futhi siyalwe kanzima. Ukushesha bebangalasa zokuphila kwanamuhla asiwazi njalo isikhathi sokuba bafunde ukunakekela indlu obuphelele. Kodwa ungakha uhlu isampula imikhiqizo ngeviki.
Ngisho uma ulungiselela kwemizwa, Awunandaba uyazi ukuthi imikhiqizo okudingayo. Sinikeza ukwenza izinhlu ezimbili. Okokuqala - yilokhu udla cishe nsuku zonke. Ngokwesibonelo, ushizi, amasosishi ikhofi, yogurt, amaqanda, imifino kanye nezithelo, ibhotela, imayonnaise, amaswidi, njll Yenza isisekelo uhlu masonto onke.
Ngaphezu kwalokho, njalo lapho uzodinga kuphela kancane ulungise yezitolo uhlu lwakho evamile imikhiqizo ngeviki. Ngaphambi kokuya esitokisini esitolo isheke in the esiqandisini futhi ekhishini amakhabethe. Qedela uhlu imikhiqizo base (okusanhlamvu, i-pasta, amazambane, izinongo, okusemathinini), ukuthi ukuphela. Akuthathi isikhathi esiningi.
Khumbula ukuthi kulesi simo kuyoba nezimo uma ngokungazelelwe isinqumo ukupheka okuthile okukhethekile, futhi ungenayo ezinye izinto ezidingekayo (utamatisi unama, isinkwa imvuthu, gelatin, isibonelo). Ingabe kufanele waphinda vakashela esitolo. By the way, ingqikithi uhambo njalo esitolo ngeke zithathe isikhathi eside kunalokho uma "wathenga" kanye ngesonto.
Nakulokhu futhi mayelana umnotho
Igcina imali isisusa esiyinhloko labo abakhetha ukuhlela ukuthenga. Kodwa kulondolozwa uhlu imikhiqizo ngeviki - okusho ukunethezeka etholakalayo wekhaya kuphela ohlakaniphile engongi. Ngakho-ke siphawule ngala macebiso alandelayo.
Kungaba kuhle ukuba ufunde ezifana sici ewusizo nekhono lokwenza isidlo esihlwabusayo "lokho kwaba" (a Casserole elayisi zinsalela noma amazambane okhamiwe wahlanganiswa, croutons lwesinkwa pocherstvevshego).
Yidla njalo lulwimi - ukuninika le mali, kubangele ukuthi singase sizinike kwamanye nezinto ezinhle. Gqamisa usuku olulodwa ngenyanga ngaphandle ukwenza imikhiqizo Semi-siphelile. Ngokwesibonelo, isikulufa futhi kwenziwe okuningi ukugxusha ngokuba meatballs esizayo, pepper eyayigcwele pancake, iklabishi eyayigcwele, meatballs, ravioli. Konke lokhu kungaba eqandisiwe futhi umane imenze ukulungela, uma kunesidingo.
Ngezikhathi ezithile, hlola esitokisini, ukwazi ukuthi ukudla udinga ukupheka kwasekuqaleni, inqobo nje abazange sawohloka.
Kuyasiza ukubala konke futhi uthathe esitolo njengoba imali eningi njengoba une eyanele yokukhokhela kubhasikidi ukudla ohlwini.
Thatha isikhathi ukuya ezitolo ezahlukene bese ukhetha omunye ogama intengo ukuthi uzoyithanda. Track amasheya.
Ngithemba kulesi sihloko esiye sanezela kuwusizo, futhi uqala ukuhlela ukuthenga. Uma kuleli cala wena asazoqoqa amasheke futhi nizibhale izindleko, it is ngokushesha kakhulu ukufunda indlela ukuze ulondoloze.
Isenzo "nquma", isenzo: uwuchaza kanjani?
Seaweed: inzuzo kanye nokulimala